Nanolotra fitaovana hanamboarana ny paompin-drano - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Manan-jo hanana rano fisotro madio ny mponina araka ny lalàna voarakitra ao anatin’ny Fanambarana Maneran-tany momba ny zon’olombelona. Koa rariny raha misitraka izany ny vahoaka ao anatin’ny Distrikan’Ambohidratrimo.
Fokontany iray amin’ireo 31 misy ao anatin’ny Kaominina Mahitsy Antanetibe Atsinanana. Mponina marobe mangetaheta rano fisotro madio, ka nahatonga ny fokonolona nanatona an’i Fy Andrianarison (Kala FY) mba hanome tolo-tanana amin’ny famitana ireo paompy maromaro ao an-tanàna. Arak’izany dia nidina ifotony tany Antenibe Atsinanana ny kandidà laharana faha-5 FY ANDRIANARISON nanolotra simenitra maro. Nambarany fa “manan-jo hanana rano fisotro madio ny mponin’Ambohidratrimo Marovatana ary ny mba ho 5/5 ny Distrikan’ny 105 amin’izay fanajana ny zon’olombelona izay” .
Mankasitraka ny vahoaka
“Misaotra anareo izahay, indrindra fa ianao ry madama Fy Andrianarison sy ireto mpiara-miasa aminao. Lehibe aminay tantsaha izao fahatongavanareo izao. Ary tsy vitan’ny hoe lehibe ihany fa nandray andraikitra, nandray adidy aty aminay tantsaha ianao. Ka zava-dehibe aminay izany, ary ilay anaranao hoe FY dia tena ho maminay tokoa satria ianao dia nankafy anay ka ho maminay foana satria dia miara-miasa aminay tonga amin’ilay fitenenan-drazana manao hoe ‘be ny havana fa izay mandray fatram-bary no tena havana’ satria tsy mamela ho reraka fa miara-miasa amin’ny vahoaka sy ny rehetra ianao. Ary tantara velona hoentin’ny taranaka mifandimby eto aminay izany hoe madama Fy Andrianarison izany” hoy Andriamatoa Randriafidy Edouard, mpamboly sady filohan’ny fokonolona Antanetine Atsinanana.
Tsy vao sambany i Fy Andrinarison, kandida laharana faha-5, no manasoa ny mpiara-belona. Efa fanaony hatramin’izay izany.
Talohan’ny tao Antanetibe Atsinanana dia efa nisy ny fanohanana ny “tournoi foot” karakarain’ny tanora ao amin’ny kaominina Mananjara. Nambaran’i fy Andrianarison fa nisafidy ankavitrihana ny hetsika izy amin’ny maha mpanabe tanora ny tenany.